Hentitra ny hafatry ny Papa Fransoa: « Ny kolikoly, ny harem-pirenena, fihavanana sy fifampiresahana… » | NewsMada
Hentitra ny hafatry ny Papa Fransoa: « Ny kolikoly, ny harem-pirenena, fihavanana sy fifampiresahana… »
Nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra. Mafonja ny hafatry ny Papa Fransoa , tamin’ny lahateny nataony teny Iavoloha. Teo ny lafiny politika sy ny fitantanana. Manampy izany ny harena voajanahary hatrany amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena. Nitodika tamin’ireo mpino sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ihany koa izy teny Soamandrakizay.
Indroa namerina ny teny malagasy « Fihavanana” ny Ray masina raha tamin’ny teny Italianina kosa ny lahateniny manontolo. Nafonja sy hentitra ny hafatry ny Papa Fransoa nanoloana ny mpitondra fanjakana, mpanao politika, fiarahamonim-pirenena ary ireo masoivoho vahiny. « Miteraka fanamby ho an’ireo nomena iraka mba hanompo sy hiaro ireo mpiray tanindrazana aminy ny andraikitra politika. Indrindra ireo tena marefo ka hanamora ny fepetra ho amin’ny fivoarana mendrika sy marina… Tsy azo boriboriana fotsiny amin’ny fomba filaza tsotra amin’ny fitombon’ny harin-karena ny fivoaran’ny firenena iray”, hoy izy.
Fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena
Nampirisika ny mpitondra ny tenany amin’ny finiavana hanohitra ny kolikoly sy ny fitadiavana tombontsoa manokana, mampitombo ny fahasamihafana sosialy. “Mankahery anareo hiatrika ny trangam-piainan’ny fanilihana, miteraka ireo fahantrana tsy zakan’ny olombelona… Tsy mihanona amin’ny fanomezana fanampiana fotsiny ny fampivoarana fa mitaky ny fankatoavana ireo manan-jo ka voaantso handray anjara amin’ny fanorenana ny hoaviny”, hoy ihany ny Papa Fransoa.
Ankoatra izany, nohitsiny fa tsy mandeha irery ny fiarovana ny zavaboahary. Tokony hitady vahaolana feno manome lanja ireo lamina voajanahary miaraka amin’ny lamina sosialy, araka ny nambarany.
Tsy fiankinan-doha amin’ny sehatra iraisam-pirenena
Nanolo-kevitra anefa ny tenany ny amin’ny tokony hamoronana asa sy fihariana ahazoam-bola, manaja ny tontolo iainana ary ny fanampiana ny olona hiala amin’ny fahantrana. Nitodika amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny tenany, avy eo, nametraka ahiahy amin’ny fiaraha-miasa amin’izy ireo sy i Madagasikara. “Atahorana hivadika kolontsaina iombonana tokana mahenika izao tontolo izao ny fivelarana, manoloana ny fanampiana omen’ny iraisam-pirenena ho an’ny fampandrosoana ny firenena… Tsy tokony hiteraka fampitoviana ho lasitra iray ny kolontsaina ny fanatontoloana ara-toekarena… Tsy maintsy miezaka isika tsy ho lasa antoka tokana hampandrosoana ny firenena ny fanampian’ny iraisam-pirenena… Ny vahoaka ao amin’ny fireneny ihany no mandray an-tanana tsikelikely ny fampandrosoana mba ho tompon’antoka amin’ny hoaviny”, hoy ny Papa Fransoa.
Tsy misy olona iray azo ailika… Fihavanana
Etsy an-daniny, mazava ny toromarika nomen’ny Ray masina ny amin’ny tokony hihainoana ny fiarahamonim-pirenena. Ho heno kokoa ny feon’ireo tsy manam-peo, araka ny nambarany. “Manainga anareo aho hihevitra ny lalan-kizorana ahitana fa tsy misy olona iray aza azo ailika na mandeha irery na very”, hoy izy. Nanteriny fa manana finiavana ny fiangonana amin’ny fanorenana firahalahiana manome lanja ny fihavanana manome sehatra ny fivoaran’ny olona manontolo ka tsy hisy na iray aza ho voailika. “Ao anatin’ny fifanakalozan-kevitra maharitra amin’ireo kristianina hafa finoana ary amin’ireo mpisehatra eo amin’ny fiarahamonim-pirenena izany”, hoy ihany izy. Nialohavan’ny fampatsiahivany ny savaranonandon’ny lalàmpanorenana ireo rehetra ireo ka nanamarihany ny soatoavin’ny kolontsaina malagasy : Fihavanana. “Mampahatsiaro ny toetsain’ny fifampizarana, ny fifanampiana ary ny firaisankina izany… Isehoan’ilay Fanahy malagasy sy ireo toetra mampiavaka azy, hanohitra ankasahiana sy ampahafoizan-tena ireo hakiviana sy ny olana atrehiny isanandro…”, hoy izy.